यस्तो हुन्छ एपेन्डिसाइटिसकाे लक्षण, एकचाेटि पढ्नुहाेस् र सेयर पनि गर्नुहाेला - ज्ञानविज्ञान
यस्तो हुन्छ एपेन्डिसाइटिसकाे लक्षण, एकचाेटि पढ्नुहाेस् र सेयर पनि गर्नुहाेला
कोही एपेन्डिसाइटिसलाई राम्रो व्याक्टेरियाहरुको घर भन्छन्, भने कोही यसलाई काम नलाने अंगको रुपमा लिन्छन् । एपेन्डिसाइटिस ठूलो आन्द्राको पुछारमा हुन्छ । हातको औला जस्तो देखिने चार इञ्च लामो यो अंगमा जब अवरोध हुन्छ, त्यतिबेला एपेन्डिक्स हुन्छ।
एपेन्डिक्स एक प्रकारको मेडिकल इर्मजेन्सी हो । एपेन्डिक्स भएको २४ घण्टा देखि ४८ घण्टाभित्रमा शल्यक्रियाद्धारा यसलाई नहटाए विरामीको ज्यान समेत जानसक्छ ।एपेन्डिक्स कुनैपनि उमेर समूहका मानिसलाई हुनसक्छ । सामान्यतया १० देखि ३० वर्ष उमेर समुहका मानिसमा बढी देखिने यो समस्या महिलाको तुलनामा पुरुषलाई बढी हुने गर्दछ ।
एपेन्डिक्स हुनुको कारण
कव्जियत, क्यान्सर लगायतका कारण जब एपेन्डिक्समा कुनै पनि किसिमको अवरोध खडा हुन्छ, त्यतिबेला एपेन्डिक्स दोब्बर भई पेट फुल्ने तथा पेटमा संक्रमण हुन थाल्छ । जसले गर्दा एपेन्डिक्समा सुन्निने गर्छ । कब्जियतका कारण पनि मानिसहरुलाई एपेन्डिक्सको समस्या हुने भएकोले चिकित्सकहरु फाइबरयुक्त खानेकुरा खाने सल्लाह दिने गर्छन् ।
१. पेटको दुखाई
२. हल्का ज्वरो
३. वान्ता आउने
४. खान मन नलाग्नु
पेटको दुखाई एपेन्डिक्सको प्रमुख लक्षण हो । यदि पेटको दाहिने भागमा बेलाबेलामा दुख्छ भने एपेन्डिक्स हुने भय हुन्छ ।यस्तो दुखाई पेटमा रहेको एपेन्डिक्सको कारण बढी हुने गर्छ । जुन नाइटोको बीचबाट सुरु भई पेटको दाहिने तर्फको तल्लो भागसम्म पुग्छ, जहाँ एपेन्डिक्स हुन्छ । एपेन्डिक्सको दुखाई खोक्दा तथा हिँड्दा अझ बढ्ने गर्छ ।
भोक नलाग्नु वा खान मन नलाग्नु पनि एपेन्डिक्सको प्रमुख लक्षण मध्यको एक हो। कयौ अवस्थामा खान मन नलाग्नुका साथै वाकवाकी लाग्ने गर्छ । यसका साथै तपाईलाई कब्जियतको समस्या पनि हुने गर्छ । यदी तपाईमा पनि यस्ता लक्षण देखिएको छ भने तुरुन्तै चिकित्सकका जानु उचित हुन्छ ।
एपेन्डिक्सको समस्या भएमा विरामीलाई हल्का ज्वरो आउने गर्छ । यस्ते ज्वरो सय डिग्री देखि १०३ डिग्रीको आसपास रहने गर्छ । जन हप्किन्स मेडिसिनका अनुसार एपेन्डिक्स भएको ४२ घण्टा देखि ७२ घण्टा भित्रमा फुट्न सक्छ ।
त्यसैले त्यो भन्दा अगाडी नै चिकित्सकका पुग्नु जरुरी छ । यदी तपाईलाई ज्वरोको साथमा कामज्वरो पनि आएको छ भने, त्यो एपेन्डिक्स फुटेको संकेत हुनसक्छ। त्यसैले, यदि तपाईलाई पनि एपेन्डिक्स भएको शंका लागेको छ भने तुरुन्तै चिकित्सकका जानु पर्छ ।
सामान्य पेट दुखाई र एपेन्डिक्स बीचको फरक
सामान्य पेट दुखाई र एपेन्डिक्सको बीच धेरै भिन्नता छ । यदी तपाईलाई केही समयको अन्तरालमा पेट दुख्ने समस्या छ र समयसँगै त्यो कम हुदै गएको छ भने बुझ्नुहोस् ।, त्यो सामान्य पेट दुखाई हो ।
सामान्य पेट दुख्दा वा ग्याष्ट्रिकको समस्या हुदाँ पूरै पटमा समस्या हुन्छ । जबकी एपेन्डिक्स भएमा दुखाई निश्चित हुन्छ । त्यस्तो दुखाई नाइटो वरिपरि सुरु भई बढ्दै जान्छ । त्यसबाहेक, यदी तपाईलाई १२ घण्टा भन्दा बढी वाता तथा पखाला छ र सहनै नसक्ने पेट दुखेको छ भने पनि तपाईलाई एपेन्डिक्स भएको हुनसक्छ । जहाँ एपेन्डिक्स छ । यस्तो समस्या भएमा तुरुन्तै चिकित्सकसितको सल्लाह लिनुपर्छ ।दैनिक नेपाली खबर ।
यस्तो एपेन्डिसाइटिस तीव्र गतिमा विकास हुने गर्छ । यो केही घन्टा या दिनमै विकसित हुने गर्छ । सुरुमै यसको पहिचान गर्न गाह्रो पनि हुन सक्छ । यस्तो एपेन्डिसाइटिस भएमा तत्काल सर्जरीको अवश्यकता हुन्छ ।
एपेन्डिक्समा जीवाणु संक्रमण, दिसा या कुनै अन्य प्रकारको रोकावटका कारण यसले शरीरलाई नै जोखिमपूर्ण बनाउँछ । जब एपेन्डिक्समा तीव्र गतिमा ब्याक्टेरिया उत्पन्न हुन्छ, यसको दुखाइ पनि त्यही गतिमा बढेर जान्छ । यस्तो एपेन्डिसाइटिस मृत्युको कारणसमेत बन्न सक्छ ।
२. क्रोनिक एपेन्डिसाइटिस
यसको दुखाइ लामो समयसम्म हुन्छ । क्रोनिक एपेन्डिसाइटिसले एपेन्डिक्समा बिस्तारै समस्या पार्न थाल्छ । बिस्तारै एपेन्डिक्स र मलद्वार सुन्निन थाल्छ । आन्तरिक दबाबका कारण सुन्निएको एपेन्डिक्सले गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्छ र समयमै उपचार नगर्दा एपेन्डिक्स फुट्न पनि सक्छ ।
सुरुवाती समयमा सामान्य लक्षण देखिन्छ । यसले पेट दुख्नुका साथै भोक पनि कम लाग्ने समस्या हुन्छ । बान्ता हुने लक्षण पनि देखिन थाल्छ ।
बिस्तारै एपेन्डिसाइटिस बढ्दै जान्छ । र, दुखाइ यसको मुख्य लक्षणको रूपमा देखा पर्छ ।
यसको दुखाइ प्रभावित ठाउँमा मात्र सीमित हुँदैन । शरीरका अन्य भित्री अंगमा पनि दुखाइ फैलँदै जान्छ । राेगीलाई दुखाइको निश्चित ठाउँ पहिचान गर्न निकै गाह्रो पर्छ । यसले पेटको सम्पूर्ण भाग दुखेको अनुभूति हुन्छ । र, बिस्तारै यस्तो दुखाइ पेटको तल्लो भागतिर सर्दै जान्छ ।
यसले पेटको माथिल्लो भागमा हल्का दुखाउँछ भने दाहिने तल्लो भागमा भने दुखाइको मात्रा अत्यधिक हुन्छ ।
९९ देखि १०२ डिग्री फरेनहाइटसम्मको ज्वरो अउने गर्छ ।
बिस्तारै पेटको माथिल्लो भाग, पिठ्युँ मलाशयमा पनि दुखाइको अनुभूति हुन थाल्छ । पिसाब गर्दा समस्या उत्पन्न हुन थाल्छ ।
ग्यास्ट्रिकका साथै कब्जियतको समस्या पनि बढ्दै जान्छ । एपेन्डिसाइटिस पत्ता लागेमा कहिल्यै पनि ल्याजेटिभ औषधि खानुहुँदैन । यो औषधिको सेवनले एपेन्डिक्स फुट्न पनि सक्छ ।
उपचार नगरी उपाय छैन
पिसाबको संक्रमणको लक्षण देखिनासाथ चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ । भिडियो एक्सरे (अल्ट्रासाउण्ड) बाट पनि एपेन्डिसाइटिसको समस्याको निदान हुन्छ । तर, करिव १५ प्रतिशतको एपेन्डिक्स ठूलो आन्द्रा पछाडि हुने भएकाले आन्द्रामा दिसा वा ग्याँस भरिंदा शुरूको अवस्था फेला नपर्न सक्छ ।
यो समस्याबाट ज्यान जान सक्ने भएकाले रोग निदान नभएसम्म पीडा कम हुने औषधि सेवन गर्नु हुँदैन । एक्सरे र इमर्जेन्सी शल्यक्रियाको सुविधा भएको अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा तुरुन्तै जानु पर्छ । एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रिया रोगीको अवस्था हेरेर घाउ बनाएर वा प्वाल पारेर (ल्याप्रोस्कोपी विधिबाट) उपचार गरी केही दिनको आरामपछि निको हुन्छ ।
छिटो उपचार भएन भने एपेन्डिक्सको वरिपरि मासु तथा आन्द्रा गाँजिएर डल्लो बन्न सक्छ । त्यस्तो परिस्थितिमा औषधि मात्र खाएर निको पार्नुपर्ने बाध्यता पर्न सक्छ । त्यस्तो बेला निको हुन समय लाग्ने भएकाले फुट्ने खतरा हुन्छ । एपेन्डिक्स फुटेमा उपचारमा झन् जटिलता थपिन्छ ।
Topics #एपेन्डिसाइटिस #एपेन्डिसाइटिस के हो #एपेन्डिसाइटिसका लक्षण
Don't Miss it यी खानेकुरा, जसले राख्छ मुटुलाई स्वस्थ अत्यन्तै महत्त्वपुर्ण जानकारी
Up Next सावधान ! यी रोगीले लसुन कहिल्यै प्रयोग नगरौ नत्र ज्यान पनि जान सक्छ
सुनको बारेमा रोचक तथ्य
सुनको विश्वव्यापी मान्यताको कारण भनेको यो बहुमुल्य धातु हो र यसलाई सुखको गहना र दुःखको खजना भन्ने भनाई पनि हाम्रो…
एलर्जीबाट जाेगीन कस्ता खानेकुरा खानु हुदैन ? जान्नुहाेस्
फुड एलर्जी साधारणतया बच्चामा धेरै हुने गर्छ। जुनसुकै उमेर समुह तथा जो कसैलाई हुन सक्ने यस्तो समस्या ४० वर्ष भन्दा…
यस्ता छन्, चिसो पानीले नुहाउँनुका फाइदा
गर्मि मौसम सुरु भयो आब चिसो पानीले नुहाउनुको नै मज्जा बेग्लै हुन्छ । शरिर पसिनाले निथुक्र भिजेको बेला चिसो पानीले नुहाउदा…
सुन्दर, बाक्लो र मुलायम कालो कपालले तपाईको प्राकृतिक सौन्दर्य र ब्यक्तित्वलाई उजागर गर्दछ । यसका साथै कपालले तपाईको आत्मबिश्वासलाई पनि बढाउछ ।…
अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुन्छ जाडोयाममा झ्यालढोका बन्द गरी सुत्न
खासगरी जाडोयाममा अधिकांशले घर, पसल वा कार्यालयमा कोठा तताउन ब्लोअर, हिटर वा कोइला बाल्ने गर्छन् । तर यसरी कोठा तताउन…
यस्ता छन् क्यान्सरका लक्षण, पिसावको रंग बदलिएको छ भने सतर्क बन्नुस्
क्यान्सर गम्भिर प्रकारको रोग हो । हरेक जसो क्यान्सरमा देखिने लक्षण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । यी लक्षण देखिएभने कहिले…